Tuesday January 26, 2016 - 01:01:02 in Articles by Super Admin
Waagacusub.info- Madaxweyne Xasan Garguurte ayaa kulankii saami qeeybsiga aqalka sare ee Odayaasha ku soo deray sheeko ka yaabisay metelayaashii ka qeybgalaayay kadib markii uu sheegay in go-aanku Federalka yahay in min seddex Xildhibaan oo dheeriya
Waagacusub.info- Madaxweyne Xasan Garguurte ayaa kulankii saami qeeybsiga aqalka sare ee Odayaasha ku soo deray sheeko ka yaabisay metelayaashii ka qeybgalaayay kadib markii uu sheegay in go-aanku Federalka yahay in min seddex Xildhibaan oo dheeriya la siiyo Maamuladda Beelaha Isaaq iyo Majeerteen ee Puntland iyo Somaliland.
Aqalka sare ee Odayaasha ayaa loo qeeybshay sidaan:
8 Xildhibaan Puntland
8 Xildhibaan Somaliland
8 Xildhibaan Galmudug
8 Xildhibaan Jubaland
8 Xildhibaan Koofur Galbeed
8 Xildhibaan Hiirsha State
Waxeey isu geeyn xisaabta guud noqotay 48 Xildhibaan,wuxuuna dastuurka dhigayaa qodobka 72-aad in tiradda odayaasha golaha sare ka badan karin 54 Xildhibaan sidaas darteed waxaa soo hartay 6 Xildhibaan.
Madaxweyne Xasan oo meesha ka saaray in gobolka Banaadir noqdo maamul goboleed ay ka soo baxaan Xildhibaano ka mid noqonaya Aqalka sare iyo Aqalka hoose wuxuu yiri "Go-aanka Dowladda Federalka Somalia wuxuu yahay in lixda Xildhibaan ee soo hartay seddex loogu daro Puntland,sidoo kalena seddexda kale loogu daro Somaliland si loo qanciyo beelaha Dir iyo Daarood.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli gaas ayaa qaatay go-aan aan qiyaastaba ku jirin inuu ku dhiiran karo,wuxuuna yiri " Annagga qaadan meeyno wax ka baxsan intaan xaqqa u leenahay mana naqaano wax aan dheer nahay Maamul goboleedyadda kale ee dalka ka dhisan”
Buuq iyo dood baden ayaa sidoo kale ka dhalatay sababta Somaliland uu Madaxweynaha ugu deray saamga aqalka odayaasha maadama ay sheegteen iney Somalia ka go-een oo leeyihiin Calan iyo lacag u gaara oo ay sheegtaan dowlad madaxbanaan.
Madaxweynaha ayaa ku dooday iney Somaliland meteli doonaan xubnaha ugu jira golayaasha sidoo kalena laga keeni doono oday dhaqameedyo.
Cabdi Kariim Guled ,Axmed Madoobe iyo Shariif Sakiin ayaa sidoo kale diiday qorshaha Madaxweynaha uu wato ee min seddex Xildhibaan oo dheeriya uu ku siiyay Maamuladda Puntland iyo Somaliland.
Sida muuqato wuxuu Madaxweyne Garguurte nolosha ku Aasay saamigii Hawiye mar haddii uu diiday in gobolka Banaadir yeesha xaquuq maadama ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay afar Milyan oo qof kuwaas oo tira ahaan ka badan dadka ku nool afar maamul ama shan maamul goboleed.
Muxuu Garguurte uga dan leeyahay inuu Puntand siiyo seddex Xildhibaan oo dheeriya ?
Si dhaba looma ogga sababta laakiin wuxuu Madaxweynaha Puntland u qaatay magac dilis iyo inuu beesha Caalamka u tuso in waxeey u qeeylinayaan aheyd iney helaan sad bursi,waa sida laga soo wariyay Cabdiweli Gaas.
Puntland ma aqbashay in wax lagu qeybsado 4.5 ?
Maamuladda Puntland iyo Jubaland waxeey qaadaceen qorshahaas wuxuuna ku adkeeystay in degaan wax lagu qeybsado ama dalka doorasho laga hergeliyo ,haddii kale Baarlamaanka hadda jira waqtiga loo kordhiyo si ay Madaxweyne iyo gudoon baarlamaan u soo doortaan.
Madaxweyne Garguurte wuxuu aaminsan yahay inuusan soo laaban doonin haddii baarlamaanka hadda jira waqtiga loo kordhiyo .
Dadka qaar waxeey leeyihiin waxaa la moodaa in Madaxweynaha loo faaliyay oo qoladiisa faallaloowyaasha u sheegeen inuusan soo laaban doonin haddii Xildhibaanadda hada jooga waqtiga loo kordhiyo.